Korea TV Series – Channel Myanmar
Prince's Prince (Korea Mini TV Series) မြန်မာစာတန်းထိုး အစ် ကိုကြီးတစ် ယောက် အ နေနဲ့ သူ့ညီမ လေးကို ကယ် တင် နိုင် မလား? Park Shi Hyun(Jonghun) ရဲ့ ညီမဖြစ် တဲ့ Yoo Na(Yuna) ဟာ ဗီဒီယို ဂိမ်းတွေကို အရမ်းစွဲလမ်းလွန်းတဲ့ otaku တစ် ယောက် ဖြစ် ပြီး သူတို့ တွေ ဖန် တီးထားတဲ့ စိတ် ကူးယဉ် ကမ္ဘာကြီးထဲမှာပဲ ပျော် နေတတ် သူဖြစ် ပါတယ် ။ Shi Hyun အ နေနဲ့ သူ့ညီမ ကို လက် တွေ့ဘဝဆီ ပြန် ရောက် လာ အောင် ခေါ်နိုင် မလား ဒါမှမဟုတ် ...
Prince's Prince (Korea Mini TV Series) မြန်မာစာတန်းထိုး
6 Persons In Room(Korea Mini Series) မြန်မာစာတန်းထိုး မန် နေဂျာ ယွန် ဆိုးတစ် ယောက် လုပ် ငန်းခွင် စစ် ဆေးရင်းပြုတ် ကျကာ ဆေးရုံ ပေါ်သို ရောက် ခဲ့ရသည် ။အခန်းအမှတ် ၃၁၃တွင် မ မျှော် လင့် ဘဲအခြားအမျိုးသမီးလူနာ၅ဦးနှင့်သိကျွမ်းကာ တဖြည်းဖြည်းခင် မင် လာသည် ။ သူတို့ ၅ယောက်လုံးက တစ်မျိုးစီ ဆိုက်ကိုရောဂါရနေတယ်လို့ ယွန်းဆိုးက သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်း သိကျွမ်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့ အကုန်လုံး ခင်ဖို့ ကောင်းမှန်းသိလာပြီး အရူးမလေးလို့ နာမည်ပြောင်ခေါ်ကြတဲ့ ဂျီဝမ်းကို စပြီး စိတ်ဝင်စားလာပါတော့တယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကရော ဘယ်လို ရှေ့ဆက်မှာလဲ၊ ဂျီဝမ်းရဲ့ နာမည်ပြောင်ကရော ဘယ်လို ရလာတာလဲ၊ သူတို့ ...
6 Persons In Room(Korea Mini Series) မြန်မာစာတန်းထိုး